Ngingayifihli kanjani ingxoxo? - I-Skype
Main > I-Skype > Veza ingxoxo skype - izixazululo zezinkinga
Veza ingxoxo skype - izixazululo zezinkinga
Ngingayifihli kanjani ingxoxo?
phezulu kwexoxauhlu, thayipha igama noma ibinzana elifakiwe kufayela le-xoxaukuthi ufunaukufihla, njengomthumeli noma igama lomhlanganyeli. kubha yamathuluzi wesobunxele. I-xoxazizovela kabusha ku-Xoxaokuphakelayo. >Ungafihli.
umenzeli wokuvumelanisa amasevisi
Sanibonani nonke, kulesi sihloko sizokwazi ukuthi sizibuyisela kanjani zonke izingxoxo zakho nama-DM ku-Instagram.
Asambe ! Ukuze ngiqale, ngizochofoza ku-'Izingxoxo Zami '
Ngizitholaphi izingxoxo ezifihliwe ku-Skype?
Ungayibuka kanjani iingxoxo efihliwe:
Kusuka kuhlu lwakho lwengxoxo, khetha i-chevron ephansi. inkinobho.
KhethaIzingxoxo ezifihliweukuletha ifayela lakho le-izingxoxo ezifihliwebuyela emuva ekubukeni kwakho. Qaphela: Ungasebenzisa futhi Usesho ukubheka okuthileingxoxoigama noma igama lokuxhumana ukuze uthole ifayela le-ingxoxofuthi.
Ake sibone ukuthi singaqala kanjani ingxoxo yangasese (ukubethela ukuphela kokuphela) nge-Skype.
Ukuze wenze lokhu, udinga ukulanda inguqulo entsha ye-Skype. Bheka incazelo ngezixhumanisi. Uma uvula i-Skype, hlola ibha eseceleni yangakwesobunxele bese uthola inkinobho ethi +.
abashayeli be-pollportport com
Chofoza kuso ukuze uqale ....
Khetha inketho ethi 'Ingxoxo Entsha Eyimfihlo' ukuze uqale Thola Manje bese ukhetha oxhumana naye ofuna ukuba nengxoxo ebethelwe yokuphela kokuphela. Thumela isimemo esisha sengxoxo yangasese ngokuchofoza inkinobho engezansi. Umuntu ngakolunye uhlangothi kufanele amukele isicelo sakho sokuqala ingxoxo.
Ungaqala ingxoxo ngokushesha lapho isicelo sengxoxo samukelwe. Manje yonke imilayezo yakho nezingcingo zibethelwe kokuphela kokuphela ngezikhiye eziyimfihlo. Akekho umuntu, kufaka phakathi i-NSA, ongakwazi ukufunda noma ukuzwa izingxoxo zakho.
Konke okudingayo ukuze uphephe ukuqinisekisa ikhodi yakho yokuphepha nomngani wengxoxo. Chofoza isithonjana sokukhiya ngezansi kwesokudla ukuthola ikhodi. Ngokwazi kwami, izingcingo ze-athikili azibetheliwe ukuphela kokuphela kuze kube manje.
Lapho nje ingxoxo eyimfihlo isiphelile, ungavala ukuxhumana. Ewindini lengxoxo, chofoza ngaphansi kwegama lakho. Izovula iphrofayili yakho, skrolela phansi.
Manje khetha inketho Qeda ingxoxo yangasese. Uyayithanda le thiphu? Sinikeze izithupha noma ubhalisele esiteshini sethu ukuthola izindatshana ezengeziwe. Ngiyabonga! Uyayithanda le thiphu? Sinikeze izithupha noma ubhalisele esiteshini sethu ukuthola izindatshana ezengeziwe.
umenzi we-movie uyabhema
Kwenzekani uma ufihla ingxoxo ku-Skype?
Wenaingathumela futhi ithole imininingwane ebucayi noma eyimfihlo ku-I-Skype, futhiwenaunenketho ye-ukucashaeyakhoimibikonoma kuniniwenauzizwe sengathi ubumfihlo bakho bungase bonakaliswe.Ukufihla ingxoxoakususiit, futhi abantu basengabuka i-imibikongokufihla i-ingxoxo.
Ingabe ikhona indlela yokufihla ingxoxo ku-Skype?
Kuphezulu kwengxoxo kuphaneli enkulu. Chofoza Fihla ingxoxo. Kungaphansi kwemenyu. Umlayezo wokuqinisekisa uzovela. Chofoza OK. Ingxoxo manje isicashile ekubukweni. Faka ikheli lakho le-imeyili ukuthola umlayezo lapho lo mbuzo uphendulwa. Siyabonga ngokuthumela ithiphu ukuze ibuyekezwe!
Ingabe ikhona indlela yokufihla umlayezo wombhalo?
Njengoba uMarites esho, funa ingxoxo ofuna ukuyifihla. Bese ukhetha ingxoxo kumiphumela yosesho, bese ubhala okuthile enkambweni yokufaka umbhalo njengoba ufuna ukuthumela umyalezo. Akudingeki nokuthi uthumele umyalezo, vele uthayiphe noma yini. Lokho kuzoveza ingxoxo. Ingabe lokhu kuyixazulule inkinga yakho? Uxolo lokhu akusizanga.
tmp cvr amafayela
Ngingazibona kanjani zonke izingxoxo zami ze-Skype?
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Skype noma ye-Microsoft. Chofoza imenyu ethi 'Buka' bese ukhetha 'Khombisa izingxoxo ezifihliwe.' Chofoza ithebhu ethi 'Okwakamuva' ukuze ubone izingxoxo zakho zakamuva, kufaka phakathi lezo osanda kuzivuselela. Uma ungayiboni ingxoxo, chofoza ku-'Bonisa Imiyalezo Yangaphambilini 'ezansi kohlu ukubonisa umlando wakho wengxoxo ogcwele.
Ngiyitholaphi imilayezo efihliwe ku-Skype?
Chofoza imenyu ethi 'Buka' bese ukhetha 'Khombisa izingxoxo ezifihliwe.' Chofoza ithebhu ethi 'Okwakamuva' ukuze ubone izingxoxo zakho zakamuva, kufaka phakathi lezo osanda kuzivuselela. Uma ungayiboni ingxoxo, chofoza ku-'Bonisa Imiyalezo Yangaphambilini 'ezansi kohlu ukubonisa umlando wakho wengxoxo ogcwele. Imininingwane ekulesi sihloko isebenza ku-Skype 6.6.